Mon, Jul 13, 2020 at 6:34am
डेङ्गु परीक्षण गराउनेको भीड, स्वास्थ्य चेतना विस्तार र सरसफाइमा जोड
काठमाडौं, २० भदौ । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिहीबार डेङ्गु परीक्षण गर्ने बिरामीको लाइन निक्कै लामो थियो । अस्पतालबाट इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको कार्यालयसम्मै लाइनले नपुगेर अस्पताल परिसरमा बिरामीको बाक्लै भीड पनि थियोे । टिकट काट्ने लाम त्यत्तिकै लामो थियो भने ज्वरो आएका बिरामी सकिनसकी भीडमा चिकित्सकको पालो कुरिरहेका थिए । ज्वरो युनिटको बहिरङ्ग (ओपीडी)मा मात्र सरुवा..
देशैभरि डेंगु प्रकोपः कृषिमन्त्री र दुई चिकित्सकसहित १३ स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित
काठमाडौं, २० भदौ । राजधानीलगायत देशैभरि डेंगु संक्रमण बढेको छ । मन्त्री र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि बिरामी परेका छन् । देशैभरि डेंगुको संक्रमण फैलिइरहँदा सरकार भने औलो नियन्त्रणका उपाय खोज्न थालेको छ । राजधानीमा मात्रै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका २ चिकित्सकसहित १० जना, नेपाल जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका दुई र इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण..
कस्तो रोग हो डेङ्गु? यसका लक्षणहरु के के हुन् र कसरी बच्ने ?
काठमाडौँ, १९ भदौ स्वास्थ्य मानव जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। हरेक मानिस आफू लामो समय सम्म बाँच्ने चाहाना राख्दछ र सोही बमोजिमको जीवनशैलीको निर्माण गर्दछ। स्वास्थ्य गतिशील हुने हुँदा विविध कारणले मानिसको स्वास्थ्यको अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि वर्षायाम स्वास्थ्यका दृष्टिले संबेदनशिल समय हो। अझ बर्षायाम शुरु हुने बेला भएकोले यो समयमा विभिन्न प्रकारका रोगहरु फैलने गर्दछन्। यी मध्ये डेंगु पनि..
तनहुँ जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी बढे
दमौली, १९ भदौ तनहुँ जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी बढेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहुँका अनुसार जिल्लाका ११ जनालाई डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत एवं महामारी रोग नियन्त्रणसम्बन्धी फोकल पर्सन ऐश्वर्यचन्द्र भट्टराईका अनुसार आज मात्रै व्यास नगरपालिकाका दुई जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखा परेको छ । यसअघि बुधबार आँबुखैरेनीका दुई जनामा डेङ्गु देखिएको थियो । डेङ्गुका बिरामीको दमौली र पोखरामा उपचार भइरहेको..
डेङ्गु तथा भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्दो, रिपोर्ट आफ्नै मोबाइलमा !
हेटौँडा, १९ भदौ प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले हेटौँडा अस्पतालको आज स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गर्नुभएको छ । सो अवसरमा उहाँले अस्पतालले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र भोग्नुपरेको समस्याका वारेमा बिरामीसँग जानकारी लिनुभएको थियो । मन्त्री दुलालले हेटौँडा अस्पताल अहिले प्रविधियुक्त भएको र प्रविधिका कारणले बिरामीको ल्याब रिपोर्ट आफ्नै मोबाइलमा आउनेदेखि सरल र छरितो स्वास्थ्य उपचारसेवा प्रदान गरेको पाएको..
मध्यपुरथिमि, १८ भदौ । सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा डेङ्गु रोकथामका लागि प्रत्येक वडामा प्रतिकात्मक कार्य सञ्चालन गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै वडाका जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यचौकी प्रतिनिधि र नगर स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखसमेतलाई डेङ्गु रोग र यसको रोकथामका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी प्रतिकात्मक कार्य सञ्चालन गरिएको हो । नगर प्रमुख बासुदेव थापाले डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि प्रयास जारी रहेकाले नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा प्रतिकात्मक कार्य सञ्चालन..
अस्पतालमै मिर्गौलाको कालोधन्दा, नाम चलेकै डाक्टर सम्लग्न
काठमाडौं, १८ भदौ । निदान अस्पतालले एक व्यक्तिलाई तयार पारेर अर्कै व्यक्तिको मिर्गौला झिकेर प्रत्यारोपण गराएको तथ्य फेला परेको छ। ललितपुरको पुल्चोकस्थित अस्पतालका चिकित्सक पुकार श्रेष्ठको टोलीले गैरकानुनी ढंगले गत साउन अन्तिम साता रामेछाप दोरम्बाका शंकरलाल लामा (योञ्जन) को मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको फेला परेको हो। श्रेष्ठ मिर्गौला प्रत्यारोपणमा श्रेष्ठ कुशल र अनुभवी चिकित्सक मानिन्छन्। डा.श्रेष्ठले हजारौं मिर्गौलाका बिरामीको उपचार गरिसकेका छन्। श्रेष्ठकै..
काठमाडौँ, १७ भदौ खानपानमा रुचि हुने मानिसहरुले आफुलाई मनपर्ने परिकार पाएमा आवश्यकता भन्दा बढि खाने गर्दछ । अझ खानपानको क्रममा खानेकुराको तालमेल नमिलाई खाइन्छ, जसले अधिकाशंलाई अपच हुने गर्दछ । समय तालिकाअनुसार नियमित खानपिन नगर्ने र लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई पाचन प्रकृयामा समस्या आउँछ र अपच हुने गर्दछ । अपचले शरीरमा पेट दुख्ने, गडबडी हुने लगायतका समस्या देखा पर्न थाल्दछन् । अपच भएसँगै..
डेङ्गु रोगको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौँ, १७ भदौ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई डेङ्गु परीक्षण तथा उपचार गर्न आउने बिरामीसित शुल्क नलिन निर्र्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय काठमाडौँलगायत देशभर सो रोग प्रकोपका रुपमा नै देखापर्न थालेपछि सरकारको एक मात्र ट्रपिकल तथा सरुवा रोग उपचार गर्ने सो अस्पताललाई मन्त्रालयले आज सो निर्देशन दिएको हो । अस्पतालका अनुसार अहिले अस्पतालमा २४ जना सो..
रगतको रिपोर्ट दुई घण्टामै, भारतबाट पनि आउछन् बिरामी
चितवन, १७ भदौ बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा रगत परीक्षणपछि रिपोर्टका लागि अब लामो सयमसम्म कुर्न नपर्ने भएको छ । हरेक दुई घण्टामा नियमित रगतको रिपोर्ट दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यका अनुसार यसअघि बिहान र बेलुका मात्र रिपोर्ट दिने व्यवस्था थियो । बेलुकाको बिहान र बिहानको बेलुका रिपोर्ट दिइँदै आएकामा दुई–दुई घण्टाको फरकमा रिपोर्ट दिन..
दिनदिनै थपिँदै डेंगीका बिरामी, चिकित्सकसमेत संक्रमित
काठमाडौँ, १७ भदौ । पर्यटकीय सहर पोखरामा डेंगी नियन्त्रणबाहिर पुगेको छ। हरेक दिन डेंगीका नयाँ बिरामी उपचारका लागि अस्पताल आउन थालेका छन्। बिरामीको भीड बढेर यहाँका अस्पतालहरू ठाउँ पाइन मुस्किल हुन थालेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका अनुसार सोमबारसम्म ४ सय ३९ जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको छ। सो कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक याम बरालले संक्रमितमध्ये आठजना ट्राफिक प्रहरी र पाँचजना स्वास्थ्यकर्मी..
म्याग्दी डेङ्गु रोगको जोखिममा
गलेश्वर, १६ भदौ हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा पनि डेङ्गु रोगको जोखिम देखिएको छ । छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतमा चार जना डेङ्गु रोगको बिरामी भेटिएपछि म्याग्दीमा पनि सर्तकता अपनाउन आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित ‘डेङ्गु रोग नियन्त्रणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम’मा सवारीसाधनका ग्यारेजमा रहेका टायर, गमला, फूलदानी, पानीट्याङ्की, पानीको मुहान, फोहर सङ्कलन केन्द्र, कवाडी राखिएका ठाउँको अवस्थालाई हेर्दा बेनी..
भक्तपुर, १६ भदौ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अनियमितताको आरोपी पदाधिकारीलाई अस्पताल प्रवेश निषेध गरेका छन् । देशभरिका क्यान्सर बिरामीको उपचार गराउने अस्पतालमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका संस्थाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ ‘ईश्वर’ र महासचिव विमलकुमार होडालाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल कर्मचारी कल्याणकारी समितिले अस्पताल प्रवेशमा निषेध गरेको हो । अस्पतालमा आज आयोजित विरोध कार्यक्रममा कर्मचारीले हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेर संस्थामा..
चितवन, १६ भदौ भरतपुर महानगरपालिकाले डेङ्गुको परीक्षणका लागि सरकारी अस्पतालमा किटको अभाव हुन नदिने जनाएको छ । भरतपुर अस्पतालमा गत शुक्रबारदेखि किटको अभावमा डेङ्गुको परीक्षण रोकिएको छ । महानगरप्रमुख रेनु दाहालले डेङ्गु परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । भरतपुर अस्पतालले किटको अभाव भएको भन्दै आइतबार भरतपुर महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसलगत्तै महानगरले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण..
काठमाडौँ, १५ भदौ । पछिल्लो समय देशका ४५ भन्दा बढी जिल्लामा देखापरेको डेङ्गु रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आफ्नो एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने जनाएको छ । अघिल्लो आवमा तीन हजार ८३४ जनामा देखिएको सो रोगको सङ्क्रमण चालू आवको एक महीना १२ दिनमा एक हजार ५३७ जनामा प्रमाणित भएको छ । एडिस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सो रोग सङ्क्रमण हुने..
भक्तपुर, १५ भदौ देशभरि फैलँदै गएको डेङ्गुको असरले भक्तपुर जिल्लालाई पनि उच्च जोखिममा पारेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य अधिकृत पार्थमणि न्यौपानेले गत वर्षभन्दा यस वर्ष चार दोब्बर डेङ्गुको बिरामी भेटिएकाले यो जिल्ला डेङ्गुको उच्च जोखिममा परेको जानकारी दिनुभयो । भक्तपुर अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीसहित अहिलेसम्म १२ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण फेला परेको हो । अहिले दुई जनाको सोही अस्पतालमा र अन्यको टेकु..
काठमाडौँ, १५ भदौ । “रातभर सुत्न पाउँदिनँ, अनिँदो रहनुपर्दा दिनमा नि काम गर्न सक्दिनँ अनि सुुरु हुन्छ सासूको कचकच,” यी भनाइ हुन् १६ वर्षमै भागी विवाह गरेपछि १७ को उमरमै आमा बनेकी सवनम स्याङ्तानको । नुवाकोट तादी गाविस, अमारे–६ निवासी आफैँ खेल्ने उमेरकी स्याङ्तानले बच्चा जन्माएपछि पाएको सास्ती बयान गर्दै भन्नुहुन्छ, “मैले स्याहार्न नजानेर हो कि, के भएर हो, बच्चा धेरैजसो..
एम्बुलेन्स सेवा शुरु हुँदा स्थानीयवासीलाई सहज
मान्म, १४ भदौ जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरीद गरेको छ । नगरवासीको सेवासुविधाका लागि एम्बुलेन्स खरीद गरिएको हो । एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीलाई स्टेचर, डोको र पिठ्युमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । ‘नगरवासीको सेवासुविधालाई ध्यान दिएर एम्बुलेन्स किनिएको हो”, नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले भन्नुभयो । “विगतमा जिल्ला अस्पतालसम्म बिरामी बोक्न दुई दिन लाग्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब सडक पुगेको छ, एम्बुलेन्सबाट बिरामी बोक्न..
डेंगु नियन्त्रणबाहिर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ- हामी एक्लैले नियन्त्रण गर्न सकेनौं
काठमाडौँ, १३ भदौ । प्राणघातक रोग डेंगुको प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । समयमै गम्भीर नभएको अवस्थामा यसले विकराल रूप लिने आशंका बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगु नियन्त्रण आफ्नो एकल प्रयासबाट सम्भव नरहेको समेत प्रस्ट पारेको छ । डेंगु नियन्त्रणभन्दा त्यसको प्रकोप बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणका लागि आमनागरिकसमक्ष आग्रह गरेको छ । डेंगुको प्रकोप..
लामो आयु चाहनुहुन्छ ? बेस्सरी हिँड्नुहोस्
काठमाडौँ, १२ भदौ तपाईंले पैदलयात्रामा गति बढाएर जीवनका केही वर्ष थप्न सक्नुहुन्छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार सुस्त गतिमा हिँड्नुभन्दा औसत गतिको हिँडाइले कुनै पनि कारणले हुने मृत्युलाई २० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्छ । एक ब्रिटिश जर्नल अफ स्पोर्ट्स मेडिसिनमा प्रकाशित रिपाेर्ट अनुसार, चालको गतिको प्रभावलाई वृद्धहरूमा बढी स्पष्ट रूपमा देखियो । औसत गतिमा हिँड्ने ६० वा त्यसभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूमा मुटुसम्बन्धी रोगबाट हुने..
दुवै मिर्गौैला खराब भएका युवालाई सहयोगको अपिल
बलेवा, १२ भदौ बागलुङ नगरपालिका–१० भकुण्डेका एक युवाको दुवै मिर्गौला काम नलाग्ने भएको छ । वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर थापाका छोरा २८ वर्षीय रबिन थापा बिरामी परेपछि जचाउन पुग्दा सो समस्या भेटिएको हो । रबिनको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भएको छ । अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि लाखौँ खर्च हुने भएकाले परिवारका सदस्यले सहयोगको याचना गरेका छन् । घरको आर्थिक अवस्थाले उपचार गर्ने सम्भव नभएपछि..
प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार अवधि लम्बियो, कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था ?
काठमाडौं, १२ भदौ । शरीरमा मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी निष्काशन गर्न प्लाज्मा फेरेसिस उपचार विधि अपनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर बसाई लम्बिएको छ। शरीरमा बढेको मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी नष्ट गर्न यो स्वास्थ्योपचार सुरु गरिएको हो। सिंगापुरस्थित नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारअवधि लम्बिएपछि निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाह स्वदेश फर्किएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था जानकारी गराउँदै मुख्य..
बालकृष्णलाई आफ्नै कर्मचारीले विष खुवाएको खुलासा
काठमाडौं, १२ भदौ । आचार्य बालकृष्णलाई उहाँनिकटकै पूर्वकर्मचारीले पेडामा विष मिसाए खुवाएको तथ्य फेला परेको छ। केही वर्षसम्म पतञ्जली योगपीठको मुख्यालयमा कार्यरत अग्रवाल थरका पूर्वकर्मचारीले कृष्ण जन्माटमीको दिन पेडामा विष खुवाएर हत्या प्रयास गरेको खुलेको हो। कृष्ण जन्माष्टमीको दिन गुरुको हैसियतले एक पाकेट पेडा लिएर हरिद्वारस्थित निवासमा आएका ती कर्मचारीले धेरै पेडामध्ये आफ्नै हातले विष मिसाएको पेडा खान दिएको खुलेको छ। आचार्य..
हिमालय आँखा अस्पतालद्वारा २० लाखको उपचार, साढे ४ लाखको शल्यक्रिया
पोखरा, ११ भदौ । नेत्र ज्योति सङ्घ कास्कीद्वारा सञ्चालित हिमालय आँखा अस्पताल, पोखराले स्थापनाको साढे दुई दशकमा २० लाख आँखाका बिरामीको उपचार गरेको छ भने साढे चार लाखको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरेको छ । साविकका गण्डकी, धौलागिरि र कर्णाली अञ्चललाई मुख्य सेवा क्षेत्र बनाएको अस्पतालबाट दैनिक ५०० बिरामीले आँखाको उपचार सेवा लिँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्रै एक लाख ४६ हजार बिरामीले..
फाइदाजनक भटमास यस्ता व्यक्तिका लागि बिष समान हुन सक्छ
काठमाडौँ, ११ भदौ खान–पिनमा शौकीन व्यक्तिलाई खाद्य पदार्थको लाभ तथा हानीबारे कुराले फरक पर्दैन । किनकी त्यस्ता व्यक्तिलाई जुन खानेकुराको स्वाद मनपर्यो, त्यसलाई नखाइ छाड्दैनन् । तर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नेहरु हरेक समयमा हरेक खाद्य पदार्थको राम्रा तथा नराम्रा गुणबारे जानकारी हासिल गर्न इच्छुक हुन्छन् । यसकारण यो आलेखमा हामी तपाईलाई भटमास (सोयाबीन)सँग सम्बन्धित केही कुराहरु बताउँदै छौं । भटमासलाई प्रोटीनको स्रोत मानिन्छ..
आयातित पत्रुखानाले अल्पायु मृत्यु
काठमाडौँ, ११ भदौ । धेरै नेपाली घरको अत्यावश्यक ब्रेकफास्टका रुपमा सिरियल लोकप्रिय भइरहेको छ। नेपाली बजारमाअन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका यस्ता खाद्यपदार्थ उपलब्ध छन्। सिरियल सामान्यता भुटेको मकै, गहुँ आदिबाट बनाइन्छ। नेपाली बजारमा उपलब्ध यस्ता ब्रान्डलाई अति प्रशोधित (पत्रुखाना) खाद्यवस्तुका रुपमा पोषणविद्ले चित्रण गर्दै आएका छन्। यस्ता अधिकांश खाद्य पदार्थमा फाइबर र प्रोटिन हुँदैन, अत्यधिक चिनी पाइन्छ। यसले रगतमा चिनीको मात्रा बढाउन सक्छ। ब्रिटिस मेडिकल..
परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न नमान्दा १० वर्षमा ७ पटक गर्भपतन !
काठमाडौँ, ११ भदौ । उमेरले तीन दशक पनि नकाटेकी उनको अनुहारमा चाउरी देखिन्छ । शरीर पनि ख्याउटे छ । काखमा पाँच सन्तान छन् । थोरै काम धेरै थकानले उनी दिक्क छिन् । २७ वर्षको उमेरमा सात पटक गरेको गर्भपतनका कारण शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिसाबले कमजोर भइसकेको उनी बताउँछिन् । ‘पाँचचोटि त औषधि खाएर बच्चा फालें । दुई पटक अप्रेसन गरें,’..
मध्यपुरथिमि, १० भदौ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले क्यान्सर रोगसँगै अन्य सबै किसिमका रोगहरुको शल्यक्रिया सेवा शुरु गरेको छ । अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर एवं अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव प्राडा ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले यही भदौ १ गतेदेखि अस्पतालले सबै किसिमका रोगहरुको शल्यक्रिया सेवा शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । देशभरिका क्यान्सर रोगीहरुको उपचार गर्दै आएको अस्पतालले भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन भएको अस्पतालको नयाँ व्यवस्थापन समिति..
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यः दिन बिराएर ‘प्लाज्माफेरेसिस’
काठमाडौँ, १० भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शरीरमा देखिएको ‘मृगौलासम्बन्धी एन्टिबडी’ को उपचारअन्तर्गत ‘प्लाज्माफेरेसिस’ प्रक्रिया ७ पटक गरिने भएको छ । बिहीबार सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको शुक्रबारदेखि नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा दिन बिराएर ‘प्लाज्माफेरेसिस’ थालिएको हो । हालसम्म उनको शुक्रबार र आइतबार गरी दुई पटक प्लाज्माफेरेसिस भइसकेको छ । मंगलबार फेरि गरिँदै छ । सिंगापुरबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उनको शरीरका लागि आवश्यकभन्दा भिन्न प्रकारको..
चिप्लेढुङ्गा, ९ भदौ कास्कीमा फैलिँदै गएको डेङ्गुको सङ्क्रमण नियन्त्रणबाहिर गएको छ । डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरोकारवालाले सचेतना एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरे पनि नियन्त्रण नभएपछि सबैलाई चिन्ताको विषय बनेको छ । कास्कीमा गत वर्ष पनि छ सयमा डेङ्गु देखिएको थियो । यस वर्ष तीन साताभित्र २८० मा डेङ्गु देखिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिका–८ भित्र रहेको कवाडी सङ्कलन केन्द्रबाट सो रोग फैलिएको बताइएको..
Results 1451: You are at page 19 of 49